20 sano ka dib weerarkii September: maxaa iska badalay xiriirka Mareykanka iyo islaamka - Bulsho News
Ikraan Tahliil: Afar guddi oo arrimo saameyn lahaa loo magacaabay...
Afghanistan: Saddex sabab oo Shiinaha uu ku taageeri karo Taliban
20 sano ka dib weerarkii September: maxaa iska badalay xiriirka Mareykanka iyo islaamka
Duullaankii Mareykanka ee Ciraaq 2003
Sannad -guuradii labaatanaad ee weeraradii 11 -kii Sebtember, ka dib ayaa wax badan ka beddelay siyaasadihii Mareykanka ee gudaha iyo dibaddaba,.
Falanqeeyayaal badan oo ku nool Mareykanka iyo daafaha adduunka ayaa ku hawlan dib -u -eegista siyaasadda Washington ee 20 sano ee la so dhaafay.
Weeraradii argagixiso ee ka dhanka ahaa Mareykanka September 11, 2001, waxay keeneen naxdin beddeshay wajiga adduunka muddo labaatan sano ah, waxayna sababtay in Washington ay dagaallo ka dhan ah argagixisada ka fuliso meelo kala duwan oo adduunka ah, kuwaas oo badankoodu ku aadanaa Carabta Afgaanistaan iyo Ciraaq.
Sababtoo ah dadkii lagu eedeeyey inay qorsheeyeen oo ay fuliyeen weerarada waxay ka soo jeedeen dalalka Carabta iyo Islaamka, xiriirka Washington ee ay la leedahay dalalka Muslimiinta iyo kuwa Carabta ayaa wax badan iska badalay 20 sano ee la soo dhaafay.
7 ka mid ah saxafiyiinta wargeyska Foreign Policy ayaa wax ka qoray isbeddelada ku dhacay siyaasadaha Washington Labaatankii sano ee la soo dhaafay, gudaha iyo dibaddaba, wixii ka dambeeyay weeraradii Sebtember.
Mina Elaraby ayaa waxay ku qortay maqaal ay ku daabacday wargeyska Foreign Policy waxayna sheegtay in tan iyo wixii ka dambeeyay weerarkii 11 septemper 2001 u wax wayn iska badalay xiriir washinton iyo dalalka Carabta iyo Muslimiinta.
Isbadal joogta ah
Qoraagu waxay leedahay weeraradii 11 -kii September, waxay isbadal joogta ah ku keeneen xiriirkii Mareykanka iyo dunida Carabta iyo Islaamka, wuxuuna noqday mid xaddidan 20 sano ee la so dhaafay.
Waxay intaas ku dartay in isbeddelkan ku yimid xiriirku uu xoogga saaray amniga tamarta, danaha guud, joogtaynta in Israa’iil ay milatari ahaan sareyso , iyada oo ay Israa;iil ay ka walwalsan tahay ilaa xad, la -dagaallanka “argagixisada Islaamka”.
Qoraaga waxay farta ku fiiqday in qarnigii labaatanaad, isbahaysiga uu Mareykanku la lahaa inta badan dalalka Carabta iyo Islaamka, uu ku salaysnaa in dalalkaas ay yihiin kuwa uu Mareykanka galangal ku leeyahay ama Midowgii Soofiyeeti dhankiisa ay jiraan.
Balse wixii ka dambeeyay Sebtembar 11, siyaasadda Mareykanka ee ku wajahan Dunida Carabta iyo Islaamka, wuxuu ku saleeyay mabda’ eedeyn ah ilaa ay ka cadaato in dalalkaasi ay yihiin kuwa aan ku lug lahayn howlha argagixisada.
Qoraaga ayaa intaa ku dartay in tuhunnada Ameerika ee inta badan caddaalad -darrada ah ee ku aaddan Carabta iyo Muslimiinta ay sii xumeeyeen xiisaddii labada dhinac ka dhaxeysay islamarkana duullaankii Mareykanka ee Afgaanistaan iyo Ciraaq aan laga gaarin hadafkii laga lahaa.
Labaatan sano kadib, dhammaan tallaabooyinkaas Mareykanka iyo isbedelada ka dhashay siyaasadihii Washington ee ku wajahnaa dunida Carabta iyo Islaamka, Washington waxay ciidamadeeda kala baxday Afghanistan.
Sida uu xaqiijiyay Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, dhammaadkii bishii hore, dalkiisu wuxuu sidoo kale soo afjari doonaa dhammaadka sanadkan hawlgalkii dagaalka ee dalkaCiraaq.
Balse waxaa su’aalo la iska weydiinayaa maxay Washington ku guuleysatay, ka dib dhammaan dagaalladii ka dhanka ahaa argagixisada, gaar ahaan waddamada Carabta iyo Islaamka
Halista argagixisada wali waa mid taagan
Bruce Hoffman, oo ah qoraa Mareykan ah oo bare ka ah Dugsiga Walsh ee Adeegga Dibadda ee Jaamacadda Georgetown, ayaa su’aal ka keenay isbeddelka laga yaabo inuu ku dhacay halistii ka imanaysay argagixisada labaatan sano ka dib weeraradii Sebtember,.
Hoffman wuxuu u arkaa in jawaabta Mareykanka ay ka bixiyeen weeraradii September laga soo hoyiyay guulo iyo guuldarooyiin-ba .
Balse wuxuu ku soo gabagabeynayaa isagoo sheegay in halista argagixisada ay wali jirto, tan ugu halista badanna ay tahay argagixisada gudaha.
In kasta oo dharbaaxooyin xooggan ay Mareykanka gaarsiiyeen Al-Qaacida, gaar ahaan dilkii hoggaamiyihoodii Usaama Bin Laadin, Bruce Hoffman wuxuu rumeysan yahay in tirada kooxaha Salafi-jihaadiyiinta, oo Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ay ku tilmaamtay argagixiso, ay noqotay afar jibbaar wixii ka dambeeyay Sebtember 11, In kasta oo fikirka iyo dhiirrigelinta ururku ay weli yihiin kuwo aad u xooggan.
Hoffman wuxuu u arkaa in guuldarradii ugu weyneyd ee siyaasadihii Washington ka dib weeraradii September ay ahayd duullaankii 2003 ee Ciraaq, kaas oo uu u arko in diiraddii lagu ciribtiri lahaa al-Qaacidada Koonfurta Aasiya loo weeciyay Ciraaq.
Waxaa uu intaa ku daray in duulaankii Ciraaq uu keenay inay soo ifbaxdo waxa loogu yeero Dawladda Islaamiga ah (ISIS), oo ah kuwa ka halis badan Al-Qaacida.
Wariyaha arrimaha caalamiga ah ee wargeyska Ingiriiska (The Independent), Borzo Draghi, ayaa ku raacsan waxa Hoffman ku sheegay maqaalkiisa, wuxuuna farta ku fiiqay in qabsashadii “musiibada” ahayd ee Maraykanku ku qabsaday Ciraaq 2003dii, iyo duulaankii reer Galbeedku ku qaadeen dhulka Carabta, uu dhiirrigeliyey jihaadiyiinta adduunka oo dhan, iyo sidoo kale Ciraaqiyiinta oo ka careysnaa inay qaataan hubka, oo ka soo horjeedda Mareykanka.
Wuxuu intaas ku daray “wax-qabad la’aan iyo maamul-xumo ay ka tagtay meelo aan maamul lahayn oo u oggolaaday kooxaha xagjirka ah ee hubaysan inay qabsadaan,” gaar ahaan ka dib markii ay burburtay gacan-ku-haynta dawladda ee woqooyiga Suuriya, taasoo dhalisay inay halkaasi ka soo ifbaxaan al-Qaacida, iyo ISIS.
Waxaa uu qoraagu rumeysan yahay in dagaalkii Ciraaq uu ahaa mid si xun loo maareeyay taasina ay ka dhalatay in Al-qaacida ay dad badan laayaan.
Dalalka uu Saamaynta ku yeeshay weerarkii 11 -kii Sebtember waxaa ka mid ahaa Sacuudiga oo xulufo wayn la ahaa Mareykanka maadaama 15 ka mid ah 19 -kii fuliyey weeraradii Sebtember ay ahaayeen muwaadiniin Sacuudiga u dhashay.
Waxay xaaladu sii xumaatay ka dib markii sannad -guuradii labaatanaad ee weeraradii September, FBI ay bilaabeen Daabacaadda qaar ka mid ah dukumiintiyadii qarsoonaa,kuwaas oo ka hadlaya xiriirka muwaadiniinta Sucuudiga, ay la lahaayeen xukuumadda Scauudiga.
Ehelada dadkii ku waxyeeloobay weeraradaas ayaa muddo dheer dalbanayay in la sii daayo oo la daabaco faylashaas, kuwaas oo ku jira baaritaannada weeraradii 2001, islamarkana soo jeedinaya in mas’uuliyiinta Sucuudigu ay hore u ogaayeen weerarada oo aanay waxba ka qaban inay ka hortagaan, laakiin dukumiintiyadan ma hayaan wax caddayn ah oo muujinaya in dawladda Sucuudigu ku lug lahayd qorsheynta weeraradii 9/11.
Qeybta kowaad ee dukumiintiyadan, oo ka kooban 16 bog, ayaa ka hadlaya xiriiro dhex maray tiro muwaadiniin Sacuudiyaan ah, iyo laba ka mid ah afduubayaashii diyaaradaha loo adeegsaday weerarada, Nawaf Al-Hazmi iyo Khaled Al-Mihdhar.
Qoraalka FBI-da ayaa tilmaamaya in ragga weerarka fuliyay ay ku andacoodeen inay ahaayeen arday soo gelay Mareykanka sannadkii 2000, ka dibna uu taageero weyn oo xagga saadka ah ka helay Omar Al-Bayoumi, oo goobjoogayaal sheegeen inuu marar badan booqday Qunsuliyadda Sacuudiga ee Los Angeles, waxaana la sheegay in Bayoumi “uu boos muhiim ah uu ka hayo” qunsuliyadda Sacuudiga.
Qoysaska dadkii ku waxyeeloobay weeraradii September ayaa muddo dheer ku cadaadinayay FBI-da inay soo bandhigaan waxa ku jira dukumiintiyada baaritaanka, waxayna qareennadooda ku doodayaan inay jirto mas’uuliyad ay Sacuudiga ku leeyihiin weerarada, xilli tiro ka mid ah saraakiishii hore ee Sacuudiga ay horay u soo muuqdeen maxkamad Maraykan ah bishii hore si ay ugu marag kacaan dhaartii dacwad ay gudbiyeen Tiro qoysas ah oo ka mid ah dhibanayaasha weerarkaasi argagixiso.
Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa si weyn u xoojiyay xiriirka Mareykanka iyo Sacuudiga, laakiin madaxwayne Biden ayaa markii uu yimid ku tilmaamo Sacuudi Carabiya mid “bahdilaad ah”, doorkii ay ku lahayd dilkii weriyaha Sacuudiga Jamal Khashoggi.
Weriyaha BBC -da Frank Gardner ayaa sheegaya in tan iyo markii uu wacay Sucuudiga, Biden uu billaabay inuu muujiyo dabacsanaan dheeraad ah mowqifkiisa ku aaddan ninka xoogga badan ee Sucuudiga Amiir Maxamed Bin Salmaan, taas oo ka tarjumaysa muhiimadda isbahaysiga Sucuudigu u leeyahay Maraykanka.
‘Ticking timebomb’: Oldham braced for more protests amid...
Australian PM rejects Chinese criticism of nuclear sub...
Qoor-qoor Oo Gaaray Muqdisho
Doorashada Aqalka Sare: Muuse Suudi siyaasiyiinta doonaya inay...
Khilaafka Soomaaliya: Sida warbaahinta caalamka uga warrantay khilaafka...
Xasan Xundubey “Talaabo sharci ah ayaa laga qaadi...